မျက်နှာချိုချိုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ချောမောတဲ့ရုပ်ရည်လေးပါအမွေရထားတဲ့ သမီးလေးကိုကြည့်ပြီးချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ မေမေချောရတနာ – Maythadin
May Thadin | November 16, 2020 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ….ပေါချောလို့လည်း ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေးချောရတနာကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမဟာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများ၊ရုပ်ရှင်ကားကြီးများကို အောင်မြင်အောင်ရိုက်ကူးထားနိုင်တဲ့ မင်းသမီးချောတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီ
ထူးချွန်ဆုကြီးကိုလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင်ချောရတနာဟာသရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာထူးချွန်ရုံသာမက အငြိမ့်ကရာမှလည်းပါရမီပါပြီး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကနိုင်တဲ့သူဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ချောရတနာဟာ အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်
သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်အိမ်ထောင်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးနဲ့သမီးလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချောရတနာဟာမိသားစုကိုအချိန်ပေးပြီးဂရုစိုက်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနည်းပါးသွားတာ
လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ချောရတနာရဲ့ သားလေးနဲ့သမီးလေးဟာဆိုရင်လည်း မေမေနဲ့ရုပ်ချင်းအရမ်းဆင်ကြပြီး ချောချောလေးတွေပါနော်။ သမီးငယ်လေး ???? ဟာဆိုရင်လည်း မျက်နှာချိုချိုလေးနဲ့ အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေးဖြစ်ပြီး
မကြာသေးမီက ချောရတနာဟာ သူမရဲ့ ???????? စာမျက်နှာမှာ “ဆရာမနဲ့” ဆိုတဲ့ ??????? လေးနဲ့ သမီးငယ်လေးနဲ့ပုံကိုတင်ပေးလာပါတယ်။ ကဲ…..ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ….ပေါခြောလို့လညျး ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးခြောရတနာကိုသိကွမယျထငျပါတယျနျော။ သူမဟာ ဗီဒီယိုဇာတျကားမြား၊ရုပျရှငျကားကွီးမြားကို အောငျမွငျအောငျရိုကျကူးထားနိုငျတဲ့ မငျးသမီးခြောတဈယောကျဖွဈပွီး အကယျဒမီ
ထူးခြှနျဆုကွီးကိုလညျး ထိုကျထိုကျတနျတနျ ရရှိထားသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ပွငျခြောရတနာဟာသရုပျဆောငျပိုငျးမှာထူးခြှနျရုံသာမက အငွိမျ့ကရာမှလညျးပါရမီပါပွီး ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြကနိုငျတဲ့သူဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ခြောရတနာဟာ အခုလကျရှိမှာဆိုရငျ
သာယာပြျောရှငျဖှယျအိမျထောငျတဈခုကိုတညျထောငျထားတာဖွဈပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သားလေးနဲ့သမီးလေးကိုပိုငျဆိုငျနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။ ခြောရတနာဟာမိသားစုကိုအခြိနျပေးပွီးဂရုစိုကျတတျသူဖွဈတာကွောငျ့ နောကျပိုငျးတှငျ အနုပညာလှုပျရှားမှုနညျးပါးသှားတာ
လညျးဖွဈပါတယျနျော။ခြောရတနာရဲ့ သားလေးနဲ့သမီးလေးဟာဆိုရငျလညျး မမေနေဲ့ရုပျခငျြးအရမျးဆငျကွပွီး ခြောခြောလေးတှပေါနျော။ သမီးငယျလေး ???? ဟာဆိုရငျလညျး မကျြနှာခြိုခြိုလေးနဲ့ အရမျးကိုခဈြစရာကောငျးတဲ့ ကလေးလေးဖွဈပွီး
မကွာသေးမီက ခြောရတနာဟာ သူမရဲ့ ???????? စာမကျြနှာမှာ “ဆရာမနဲ့” ဆိုတဲ့ ??????? လေးနဲ့ သမီးငယျလေးနဲ့ပုံကိုတငျပေးလာပါတယျ။ ကဲ…..ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
နှစ်​နာရီဆို​သောအချိန်​ခဏ​လေး အတွင်းမှာပဲ သိန်းပေါင်းရာချီတန်တဲ့တန်ဖိုးကြီး ကားအစီး (၃၀) နီးပါးကို ရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ (ရုပ်​သံဖိုင်​)
ပုဒျမ(၂၅)ဖွငျ့ ခွိမျ့ကကေို ကိုထောငျခမြဲ့ကိစ်စ မတရားကွောငျး အခကျြကကြ ပနျဆယျလိုပွောပွီ